Malunga nathi -I-Rapid Scaffolding (Ubunjineli) Co., Ltd.
Ukukhawuleza ukunikezela (Ubunjineli) Co., Ltd.yinkampani ehamba phambili kushishino banikwe e China. Ukusukela ukusekwa kwayo ngo-2003, i-RS ikhule ngokuthatha imiceli mngeni emitsha kwaye impumelelo yayo eqhubekayo ivela ekuxabiseni abaxumi bayo kunye nabasebenzi kunye nokuzinikela kwinkonzo, ukusebenza kunye nomgangatho.
Ukukhawulezisa ukunikezela ngokukhawuleza kuyazidla ngokuba neqela lobuchwephesha kunye namava obuchwephesha. Ngokwezicelo ezahlukeneyo ezivela kubaxhasi bethu, sinokubonelela ngoluhlu lonke lokunikezelwa kunye nokuyilwa kwefomwork. Sinikezela ngenkonzo yokumisa kuyo nayiphi na iprojekthi.
Sineqela lemveliso elinamava kakhulu, eligcina inqanaba eliphezulu kuwo onke amabakala enkqubela phambili yemveliso. Iqela ngalinye labasebenzi likhokelwa ngumphathi obeka iliso kwimisebenzi yemihla ngemihla. Iinkqubo ezizenzekelayo zokuwelda kunye neerobhothi zisetyenziswa kakhulu. Siphuhlisa umatshini wentsimbi weplanga owenza umatshini, owonyusa amandla emveliso yeplanga, malunga 1,000 iiPC ngosuku. Ngabasebenzi abanamava, oomatshini abaphambili kunye nolawulo olufanelekileyo, amandla ethu malunga Ngama-25,000 iitoni ngonyaka.
Sine inkqubo epheleleyo yolawulo lomgangatho, eqinisekisa umgangatho ophezulu weemveliso zethu kwaye iqinisekisa ukuba yonke inkqubo ngenxa yeshedyuli. Ukukhawuleza ukunikezela (Ubunjineli) Co., Ltd. ufumene Ukwamkelwa kwe-ISO9001, i-CE, i-ISO14001, i-OHSAS18001. Zonke iinkqubo zethu zokukhuphela zivavanyelwe ukuqinisekisa i-ANSI A10.8, AS / NZS1576.3, Japan standard JIS.